Luqadaha Afrika si ay u helaan ereyo saynis oo aad u badan - AfricArXiv
Waan ku faraxsanahay inaan ka soo muuqanno Nature isbuucaan, dhinac Masakhane maadaama aan ka shaqaynayno 'Sayniska Qurxinta'.
Akhri nuqulka maqaalkan oo Faransiis ah ecomag.fr/les-langues-africaines-pour-obtenir-plus-de-terms-scientifiques-sur-mesure-ecologie-science/
Erayo badan oo saynisku ku badan yahay ayaan weligood lagu qorin afafka Afrika. Hadda, cilmi -baarayaal ka socda Afrika oo dhan ayaa taas beddelaya.
Cilmi -baadhayaashu waxay rabaan inay ballaadhiyaan ereyada sayniska afafka Afrika oo ay ku jiraan Luganda, oo lagaga hadlo Bariga Afrika. Sawirka: arday-macalimiin Kampala. Dhibcaha: Indhaha Ubiquitous/Alamy
Ma jiro eray isiZulu asal ah oo loo yaqaan dinosaurka. Jeermiska waxaa loo yaqaan amagciwane, laakiin ma jiraan ereyo gooni ah oo loogu talagalay fayrasyada ama bakteeriyada. Quark waa ikhwakhi (loogu dhawaaqo kwa-ki); ma jiro erey loogu talagalay isbeddelka cas. Cilmi -baarayaasha iyo isgaarsiinta sayniska oo adeegsanaya luqadda, oo ay ku hadlaan in ka badan 14 milyan oo qof oo ku nool koonfurta Afrika, waxay ku dhibtoonayaan inay ku heshiiyaan ereyada horumar.
IsiZulu waa mid ka mid ah qiyaastii 2,000 oo luqadood oo Afrika looga hadlo. Cilmiga casriga ah ayaa iska indho tiray inta badan afafkaas, laakiin hadda koox cilmi baarayaal ah oo ka socda Afrika ayaa doonaya inay taas beddelaan.Waa maxay isiZulu ee dinosaurka? Sida saynisku u dayacay afafkii Afrika
Mashruuc cilmi baaris oo la yiraahdo Sayniska Decolonise waxay qorshaynaysaa inay 180 waraaqood oo cilmiyeed ka soo saarto server -ka diyaarinta AfricArXiv u turjumto 6 luqadood oo Afrikaan ah: isiZulu iyo Waqooyiga Sotho oo ka socda koonfurta Afrika; Hausa iyo Yoruba oo ka yimid Galbeedka Afrika; iyo Luganda iyo Amxaariga oo ka yimid Bariga Afrika.
Luqadahaas waxaa si wadajir ah ugu hadla ku dhawaad ​​98 milyan oo qof. Horaantii bishaan, AfricArXiv loogu baaqay soo gudbinta ka yimid qoraayaasha danaynaya in waraaqadooda loo tixgeliyo turjumaad. Xilliga kama dambaysta ah waa 20ka Ogosto.
Waraaqaha la turjumay waxay ku koobnaan doonaan maadooyin badan oo sayniska, farsamada, injineernimada iyo xisaabta ah. Mashruucan waxaa taageeraya Sanduuqa Lacuna, oo ah xog-saynis-bixiye cilmi-baarayaal ka tirsan dalalka dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa dhexe. Waxaa la bilaabay sannad ka hor deeq -bixiyeyaal iyo deeq -bixiyeyaasha dawladda ee Yurub iyo Waqooyiga Ameerika, iyo Google.
Luqadaha laga tagay
La'aanta ereyada sayniska ee afafka Afrika waxay leedahay cawaaqib dhab ah oo dunida ka jira, gaar ahaan xagga waxbarashada. Tusaale ahaan, Koonfur Afrika, in ka yar 10% muwaadiniintu waxay ku hadlaan Ingiriis oo ah luuqaddooda hooyo, laakiin waa luuqadda waxbaridda ugu weyn ee dugsiyada - wax ay aqoonyahannadu sheegaan inay caqabad ku tahay barashada sayniska iyo xisaabta.
Luqadaha Afrika ayaa looga hadhay kacaankii internetka, ayay tiri Kathleen Siminyu, oo ku takhasustay barashada mashiinka iyo habaynta luqadda dabiiciga ah ee afafka Afrika ee fadhigoodu yahay Kenya. “Afafka Afrika waxaa loo arkaa inay yihiin wax aad ku hadasho guriga dhexdiisa, oo aan ahayn fasalka dhexdiisa, oo aadan ka muuqan goobta ganacsiga. Waxay la mid tahay sayniska, ayay tidhi.
Siminyu waa qayb ka mid ah Masakhane, oo ah urur cawska xididdada u ah cilmi-baadhayaasha danaynaya habaynta luqadda dabiiciga ah ee afafka Afrika. Masakhane, oo macnaheedu yahay 'wax baan ku wada dhisnaa' isiZulu, waxaa ku jira in ka badan 400 xubnood oo ka kala socda ilaa 30 dal oo qaaradda ku yaal. Waxay wada shaqaynayeen muddo saddex sano ah.
Mashruuca Sayniska Decolonise waa mid ka mid ah hindisayaal badan oo kooxdu waddo; kuwa kale waxaa ka mid ah in la ogaado hadallada nacaybka ee Nigeria iyo barashada algorithms-ka barashada mashiinka si loo aqoonsado magacyada iyo meelaha Afrikaanka ah.
Ugu dambayntii, Sayniska Decolonise wuxuu hiigsanayaa inuu abuuro qaamuusyada internetka ee ereyada sayniska si xor ah loo heli karo lixda luqadood, oo u adeegsada inay ku tababaraan algorithms-ka barashada mashiinka tarjumaadda. Cilmi -baadhayaashu waxay rajaynayaan inay dhammaystiraan mashruucan bilowga sannadka 2022. Laakiin waxaa jira hami ballaadhan: in la yareeyo khatarta afafkaani noqdaan kuwo duugoobay iyada oo la siinayo meel adag oo internetka ah.
Laakiin “ma doonayno inaan la soo baxno erey cusub”, ayuu raaciyay Sibusiso Biyela, qoraa ka tirsan ScienceLink, oo ah shirkad isgaarsiinta sayniska oo fadhigeedu yahay Johannesburg oo shuraako la ah mashruuca. "Waxaan rabnaa qofka akhrinaya maqaalkaas ama ereygaas inuu fahmo macnaha ay leedahay markii ugu horreysay ee ay arkaan."
Biyela, oo wax ka qora cilmiga isiZulu, badanaaba wuxuu soo saaraa shuruudo cusub adoo eegaya xididdada Giriigga ama Laatiin ee ereyada sayniska ee jira ee Ingiriisiga ah. Meeraha, tusaale ahaan, wuxuu ka yimid Giriiggii hore qorshaynta, taasoo la micno ah 'warwareege', maxaa yeelay meerayaasha waxaa loo arkay inay ka gudbaan cirka habeenka. In isiZulu, tani waxay noqonaysaa ummadda, oo waliba macneheedu yahay warwareeg. Erey kale oo meeraha, oo loo isticmaalo qaamuusyada dugsiga, waa ummada, taas oo macnaheedu yahay 'Dhul' ama 'adduun'. Erayada kale waa sharraxaad: tusaale ahaan, 'fossil', tusaale ahaan, Biyela ayaa curisay weedha amathambo amadala atholakala emhlabathini, ama 'lafo duug ah oo dhulka laga helay'.
Meelaha sayniska qaarkood, sida cilmi -baarista noolaha, cilmi -baarayaasha isku dayaya in ay helaan ereyada saxda ah ayaa u baahan doona in ay ka dhex helaan ilo lagu hadlo. Lolie Makhubu-Badenhorst, ku-simaha agaasimaha Xafiiska Qorshaynta iyo Horumarinta Luqadda ee Jaamacadda KwaZulu-Natal ee Durban, ayaa sheegtay in maqnaanshaha eray cilmiyeed ka mid ah xogta xogta qoran aysan macnaheedu ahayn inuusan jirin. “Waxaad tahay qof ku qornaa qoraalka, waxaan ahay udub dhexaad. Aqoontu way jirtaa, laakiin si fiican looma diiwaangeliyo, ”ayuu yidhi Makhubu-Badenhorst, oo aan ka mid ahayn mashruuca Sayniska Decolonise.
Khabiirada eraybixinta ee Sayniska Decolonise waxay la iman doonaan qaab lagu horumariyo ereyada saynis isiZulu, ayay tiri Biyela. Markay taasi dhammaato, waxay ku dabaqi doonaan luqadaha kale.
Kooxdu waxay u soo bandhigi doontaa qaamuusyadeeda qalabyo lacag la'aan ah saxafiyiinta iyo xiriiriyeyaasha sayniska, iyo sidoo kale guddiyada luuqadaha qaranka, jaamacadaha iyo shirkadaha teknoolojiyadda, kuwaas oo si isa soo taraysa u bixinaya turjumaad otomaatig ah. Biyela ayaa tiri: "Haddii aad sameysato erey oo aysan dadka kale adeegsan, ma geli doonto luqadda."
Google waxay ku baaqaysaa in laga caawiyo sidii loo horumarin lahaa tayada tarjumaadaha afkeeda Afrika. Dhibcaha: Cristina Aldehuela/AFP iyada oo loo sii marayo Getty
Teknoolojiyadda weyn: 'waxaan u baahanahay kaalmadaada'
Cilmi -baarayaasha Masakhane ayaa sheegaya in shirkadaha farsamada adduunka ay taariikh ahaan iska indho tireen afafka Afrika, laakiin sanadihii la soo dhaafay, waxay billaabeen maalgelinta cilmibaarista.
"Waxaan ka warqabnaa in kumanaan kun oo afaf Afrikaan ah aan hadda lagu matalin software-ka tarjumaadda," ayuu afhayeen Google u sheegay Dabeecadda. Shirkadda weyn ee farsamada ayaa doonaysa inay ballaariso Google Translate si loogu daro afaf badan oo Afrikaan ah, oo ay ku jiraan Twi, Ewe, Baoulé, Bambara, Fula, Kanuri, Krio, Isoko, Luganda, Sango, Tiv iyo Urhobo, ayay ku dareen. Si kastaba ha ahaatee, waxay u baahan tahay “kuwa ku hadla luqadahaas si ay nooga caawiyaan hagaajinta tayada tarjumaadahayaga” si loogu daro adeegga.
"Fikradda weyn waa lahaanshaha dhaqanka ee sayniska," Biyela ayaa sharraxaysa. Isaga iyo Abbott labaduba waxay yiraahdaan waa muhiim in la xakameeyo sayniska iyadoo dadka loo oggolaanayo inay cilmi baaris ku sameeyaan oo ku hadlaan sayniska afkooda. Waqtigan xaadirka ah, waa suurtogal in afafka Afrika loo adeegsado in laga hadlo siyaasadda iyo isboortiga, laakiin sayniska ma aha, ayay tiri Biyela.
Sidoo kale, Ingiriisku waa luuqadda ugu weyn ee wakiilnimada deegaanka iyo dhawrista - laakiin haddii dadku fahmaan macnaha ereyo iyo fikrado gaar ah oo ay kaga hadli karaan luuqaddooda hooyo, waxay dareemi karaan inay ka go'een dadaallada dowladda ee lagu ilaalinayo nidaamka deegaanka iyo noocyada, ayay tiri Bheka Nxele , maareeyaha barnaamijka dib u soo celinta deegaanka, qorshaynta deegaanka iyo ilaalinta cimilada ee degmada eThekwini ee Koonfur Afrika.
Cilmi -baadhayaashu waxay ka walaacsan yihiin in haddii afafka Afrikaanka aan lagu darin algorithms -ka internetka, ay, ugu dambayn, noqon karaan kuwo duugoobay oo la illaaway. “Kuwani waa luqado [dadku] ku hadlaan. Kuwani waa luqado ay isticmaalaan maalin kasta, waxayna la nool yihiin oo arkaan xaqiiqda ku jirta x tirada sannadaha, luqaddooda ayaa laga yaabaa inay dhimato maxaa yeelay ma jirto raad dijital ah, ”ayay tiri Siminyu.
Categories:	ogeysiisyadaiskaashiKala Duwanaanta Luqadda
Tags: Sayniska Decolonisekala duwanaanta luqaddaMasakhaneNature-saxaafadeedTarjun Saynis